Shiinaha KN95 Soo saarid iyo Warshad | Tiknoolajiyada Caafimaadka ee Cadeysan ee Hebei
3.3D goynta saddex-geesoodka ah ayaa hagaajin kara ku-habboonaanta wejiga, hagaajinaysa saameynta ilaalinta, simbiriirixan siman, xirxirida geeska xiisaha leh ee aan walxaha lahayn, alxamid wanaagsan, xirmo jilicsan oo sarreysa, naqshad ballaaran oo jirka ah ma dhaawaceyso maqaarka, waqti dheer maahan dhagan, oo gashan raaxo badan.
4. Dhexdhexaadiyaha xayeysiinta elektaroolka wuxuu xayeysiin karaa sheyga, iyo lakabyo badan oo lakabka shaandhaynta hufan leh lakabka ayaa ilaaliya caafimaadka neefsashada.
Waxqabadka iyo Adeegsiga
Maaskarada N95 waxay leedahay waxtarka sifeynta ee ka badan 95% ee walxaha leh dhexroor hawleedka 0.075µm ± 0.02µm. Dhexdhexaadinta aerodynamic ee bakteeriyada hawada iyo fangaska fangasku badanaa wey ku kala duwan yihiin inta udhaxeysa 0.7-10 µm, taas oo sidoo kale ku jirta inta u dhaxeysa ilaalinta ee wajiyada N95. Sidaa darteed, maaskaro N95 waxaa loo isticmaali karaa ilaalinta neefsashada ee walxaha qaarkood, sida boodhka soo baxa inta lagu gudajiro howlaha shiididda, nadiifinta iyo ka shaqeynta macdanta, bur iyo waxyaabo kale oo gaar ah. Waxay sidoo kale ku habboon tahay dareeraha ama saliida aan saliida lahayn ee aan saliida lahayn ee lagu soo buufiyo. Arrin gaar ah oo gaaska waxyeellada u leh. Waxay si wax ku ool ah u sifeyn kartaa oo u sifeyn kartaa urta aan caadiga ahayn ee la nuugay (marka laga reebo gaaska sunta ah), waxay gacan ka geysan kartaa yareynta heerka soo-gaadhista qaar ka mid ah maaddooyinka yar-yar ee la nuugi karo (sida caaryada, anthracis, qaaxada, iwm), laakiin ma baabi'in karto infekshinka xiriirka, jirrada ama halista dhimashada
Noocyada: Maaskaro KN95 Dadka: Shaqaalaha caafimaadka ama shaqaalaha la xiriira
heerka: GB2626: 2006KN95 Heerka Filter: 99%
Goobta wax soo saarka: Gobolka Hebei Sumadda:
tusaale: Qaabka Koobka Nooca jeermiska dila:
cabir: Shahaadada Tayada: Hayso
heerka amniga: magaca sheyga: Maaskaro KN95
Sarshiga maaskaro u dhig si siman, u jiido gacmahaaga oo u riix xagga wejigaaga, buundada sanka dheer ee kore; qodobbada muhiimka ah: daboolo sanka, afka iyo garka, dul dhig suunka maaskaro korka madaxa, suunka hoose ee qoorta gadaashiisa, oo saar fariimaha farahaaga Sanka sanka, iskuday inaad sameyso maaskaro cirifka wejiga ayaa ku habboon.
1. Dhaq gacmahaaga ka hor intaadan xiro maaskaro, ama iska ilaali inaad taabato dhinaca gudaha ee maaskarada adoo xiranaya maaskaro si loo yareeyo suurtagalnimada faddarada maaskarada.
Kala saar gudaha iyo dibedda, kor iyo hoos maaskaro.
2. Ha ku cadaadin maaskaro gacmahaaga. Maaskarada 'N95' waxay faquuqi karaan oo keliya fayraska dusha maaskaro. Haddii aad ku maroojiso maaskarada gacmahaaga, fayrasku wuxuu ku dhex tiimban doonaa maaskaro dhibco, taas oo si fudud u keeni doonta infekshinka fayraska.
3. Isku day inaad ka dhigto maaskaro wejiga si wanaagsan. Qaabka tijaabada ee ugu fudud ayaa ah: Ka dib markaad maaskaro gashato, si xoog ah u neefso si hawo aysan uga soo daadan karin carada maaskaro.
4. Maaskarada kahortaga waa inay xiriir dhow la leedahay wejiga isticmaalaha. Isticmaaluhu waa inuu xiiraa gadhka si loo hubiyo in maaskarada ay si adag wejiga ula gasho. Garka iyo wax kasta oo la dhigo inta u dhexeysa goomaatada maaskaro iyo wejiga ayaa sababi doona maaskarada inay daato.
5. Ka dib markaad hagaajiso booska maaskarada iyadoo loo eegayo qaabka wajigaaga, isticmaal faraha faraha labada gacmood si aad ugu cadajiso sanka geesaha wejiga kore ee maaskaro si aad ugu dhawaato wejiga.
Marka xaaladaha soo socda dhacaan, maaskarada waa in lagu beddelaa waqtiga:
1. Marka cilladda neef-mareenka ay si weyn u kordho;
2. Markuu maaskaroku jabo ama dhaawacmo;
3. Marka maaskaro iyo wejiga aan si dhow laysugu xidhi karin;
4. Maaskarada waa wasakhaysay (sida dheecaanka dhiigga ama dhibcaha iyo walxaha kale ee shisheeyaha ah);
5. Maaskarada waa wasakhaysay (waxaa loo isticmaalay qolal gaar ah ama la xiriir bukaanka);
Hore: Caafimaadka caqliga oo dhan hal mashiin
Xiga: Maaskaro faashad